OPDOn maaliif waraana Itoophiyaan qabdu mara gara Oromiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOn maaliif waraana Itoophiyaan qabdu mara gara Oromiyaa
OPDOn maaliif waraana Itoophiyaan qabdu mara gara Oromiyaa fi WBOtti bobbaasaa jirti? Maaliif yakka gara jabinaan guutame kan waggaa 28 TPLFf (Wayyaaneef) ibsaa taatee dalagaa turte caalaa dalagaa jirti? Maaliif humnooti habashaa adda addaa (Amaaraa fi Tigreen) hanga funyaaniitti hidhatanii fi hidhata osoo jiranii WBO fi Oromoo irratti xiyyeeffatti?
1. Yakkoota sanyii duguuggaa, hidhaa, lafa Oromoo guguruu fi Oromoo buqqaasuu waggaa 28 Wayyaanee waliin ta’uun Oromoo irratti raawwatteef bor itti gaafatami waan dhufuuf isa sodaadhaa ykn gaafatamaa fi qaama bor seeraan ishee fi EPRDF hunda gaafachuuf deemu balleessuufi.
2. Gochaan OPDO ammaa kun kan ibsu yakka dalagaa turaniif utuu mana murtii hin deemin ragaa ofitti ba’uu agarsiisa. Akka namooti tokko tokko yaadan, ejjennoon OPDO waa’ee nageenya biyyaa ykn tokkummaa Impaayera sanaaf yaaduu osoo hin taane nageenya (nageenna) ofiitiif akkasuma yakkoota essattuu isaan gaafachiisuuf deemuuf immunity barbaachadha.
Ji’a lama irraa torban lama, torban lama irraa sa’aatii 24 Yaa OPDO wayyaaneen brain 🧠 cell keessan nyaattee fixeeti sammuu waan itti yaadan hin qabdaani afaan itti dubaatani malle uummata affuuftu!!
Yaadannoo Jila ABO magaalaa D.Doolloo
Ummatni magaalaa D.Doolloo addatti, Qeerroon waan wagga 27 guutuuf ukkaamamee ture gaafa waltajjii ABO kana waan futtaafatee of keessaa baase fakkaata. Nagaan, Jaalallii fi Gammachuun Gaaddisa ABO jalatti. Bakka ABOn jiru nagaa fi gammachuutu jira kan jennuuf dhugaa qabatamaa jiru irraa kaanee ti.
Afuurri ABO Oromoo hunda irra jira. Mooraan ABO mooraa nagayaa, mooraa qabbanaa, mooraa bilisummaa fi walabummaa Oromoo leellisuu ti. Mooraa keessatti of ilaalanii fi egeree ofii itti tilmaammatan. Mooraan ABO mooraa falmii mirga abbaa biyyummaa, kan bilisummaaf keessatti hiriiranii dha.
Mooraan kun mooraa nagaa fi tasgabba’aa akka hin taaneef yaaliin gama diinotaa fi tumsitoota isaaniin hin godhamin jira hin fakkaatu. Har’as mooraa Oromoon kiyya jedhee karaa danda’u cufaan jabeeffatuuf tattaafataa jiru kana, kanneen hin feenee fi itti hinaafan akka hin sabatoofneef ifaanis, dukkanaanis itti duuluu fi gufachiisuuf shiruu irraa hin dhaabbanne. Xumurri mo’iinsaa garuu kan ABO fi ummata Oromoo ti.
ABOn yoomuu jiraataa dha; dagaagaadhas; caalaattis ni bargaaga. Jaalallii fi kabaji ABO ummata Oromoo biraa qabu guyyuu dabala malee hin hir’isu. Dhiibbaan gama adda addaan isa irratti godhamu, olollii fi duulli hunda hamate irratti geggeessamu ABO sochii isaa irraa of duuba hin deebisu. Hin dhaabus. Keenya fuuldurri ifaa dha.
ABO akka jallatamuu fi kabajamu kan godhe iccitii biraan hin jiru Kaayyoo fi Akeeka isaa ti. Kaayyoo fi akeeki ABO hanga jirutti, amma Kaayyoo fi Akeeki kun milkaa’utti ummatni Oromoo dhaaba isaa jaallatu ABO faana hiriiree falmaa mirga abbaa biyyummaa, kan bilisummaa fi walabummaa itti fufa.
Har’as boris ABO waliin fuul-duratti. Injifannoon keenyuma!